Ahoana ny fomba hamafana horonan-tsary na fantsona izay tsy mahaliana anao ao amin'ny YouTube | Vaovao momba ny gadget
Fafao ny horonantsary sy fantsona YouTube izay tsy mahaliana anao amin'ity fanitarana ity
Raha mampiasa YouTube tsy tapaka ianao dia azo antoka fa efa sendra an'ity toe-javatra manaraka ity ianao. Midira amin'ny tranonkala malaza ianao ary eo amin'ny pejy fandraisana dia mahita sosokevitra be dia be ianao, miaraka amin'ny horonan-tsary sy fantsona mety hahaliana anao. Hatreto tsy ratsy, fa amin'ny tranga maro fotsiny, ireo sosokevitra omen'ny tranonkala antsika dia tsy mahaliana antsika, na avy amin'ny mpanakanto na fantsona aza izay manelingelina mihitsy.
Inona no azontsika atao amin'ireo karazana tranga ireo? Afaka amin'ny YouTube izahay asio marika amin'ny horonan-tsary na fantsona tsirairay izay tsy mahaliana antsika, saingy dingana iray izay mety ho lava ny tranga sasany. Ho fanampin'ny fananganana sosokevitra vaovao, izay mety tsy mahaliana antsika koa. Misy ny vahaolana amin'ny endrika extension.
Ity extension extension ity dia antsoina hoe Video Blocker sy ny afaka mampiasa Google Chrome sy Mozilla Firefox izahay. Ny hevitr'izany dia ny hahafahantsika manakana na manafoana ireo horonantsary na fantsona izay tsy mahaliana antsika akory. Amin'izany fomba izany, rehefa miditra amin'ny tranokala YouTube isika dia tsy mila mahita ireo atiny ireo amin'ny fotoana rehetra.
Noho ny fanitarana dia afaka manafoana azy ireo amin'ny tolo-kevitra na sosokevitra ao amin'ny tranonkala izahay. Lavitra, azo atao ihany koa ny manaisotra azy ireo amin'ny fikarohana. Noho izany, raha misy mpanakanto, fantsona na hira halanao amin'ny herinao manontolo, azonao atao ny manafoana azy tanteraka amin'ity fomba ity, dia tsy ho hitanao intsony izany rehefa mampiasa tranonkala ianao.
1 Hamafa horonan-tsary na fantsona YouTube
2 Fehezo ireo lisitra noforoninao
Hamafa horonan-tsary na fantsona YouTube
Ny zavatra voalohany tokony hataontsika amin'ity tranga ity dia ampidino ny extension amin'ny browser. Raha mampiasa Google Chrome ianao dia azonao sintonina avy amin'ny ity rohy ity Raha mpampiasa Mozilla Firefox ianao dia azonao atao ny misintona azy ity rohy. Ka apetrakay ao amin'ny tranokalanay izany ary avy eo izahay dia vonona hiditra amin'ny YouTube mampiasa azy. Ho hitanao fa tena tsotra ny fampiasana ny fanitarana.
Rehefa nametraka azy isika ary efa eo amin'ny tranonkala, tsy maintsy tsindrio ny kisary fanitarana, izay hita eo amin'ny ilany ankavanana ambony amin'ny tranokalanay. Noho izany, ao anatin'io dia manana bara ahafahantsika mampiditra lahatsoratra, izay mety ho anaran'ny fantsona, mpihira na hira iray. Eo akaikin'ity bara ity dia manana bokotra iray ahafahantsika misafidy raha fantsona na horonan-tsary no tadiavintsika, mba ho haingana sy mahomby kokoa ity fikarohana ity.
Izay rehetra tianay esorina dia ampidirinay ao amin'ny lisitray, amin'ny fipihana ny bokotra manga milaza hoe Add. Ity lisitra ity dia hanangona ny atiny rehetra nosakananay noho izany tao amin'ny kaontinay, manakana anay tsy hahita azy ireo rehefa miditra amin'ny YouTube izahay. Tsy manam-petra izahay rehefa manampy atiny ao. Ary koa, raha manova ny saintsika momba ny iray isika amin'ny fotoana rehetra, dia azontsika esorina foana io lisitra noforonintsika io. Ka manana ny mety foana hanafoana ny zavatra ataontsika isika.
Fehezo ireo lisitra noforoninao
Ao amin'ny extension dia manana safidy roa azo atao izahay, hahafahantsika mitantana izay ataontsika izany. Ka raha namorona lisitra misy atiny YouTube tadiavinay sakanana izahay dia afaka miditra ao anatin'io lisitra io amin'ny fotoana rehetra ary hahita hoe inona ny atiny nampidirinay tao. Ka azontsika jerena raha marina izay nampiana tao, na raha nametraka zavatra tsy tokony ho ao amin'ity lisitra ity isika.
Ho fanampin'izay, manana safidy fiarovana izahay, izay mahaliana amin'ity tranga ity. Satria hamela antsika hifehy izay manana fidirana amin'ireo lisitra ireo voasakana ao amin'ny YouTube ny atiny. Ka raha mizara ny solo-sainao amin'ny olon-kafa ianao dia ho afaka hiala na hanakana olona tsy hiditra ao fotsiny. Ity dia zavatra iray izay azon'ny mpampiasa tsirairay atao ny mitantana ny zavatra tiany amin'ny fanitarana mihitsy amin'ny fomba tsotra. Tsara ny mahita fa manana fahaizana manokana ianao.
Raha te-hanala atiny sasany amin'ny lisitray izahay dia afaka mahita izany eo amin'ny ilany ankavanan'ny fidirana na atiny tsirairay, azontsika ny safidy hamafana, miaraka amin'ny soratra Delete amin'ny teny anglisy. Amin'ny fipihana an'ity safidy ity dia azontsika esorina ity atiny ity, na fantsona na horonantsary, avy amin'ity lisitra ity, ary hamerina azy io amin'ny YouTube. Raha ny mamafa ny lisitra iray manontolo no tadiavinay amin'ity tranga ity, dia azontsika atao ny mampiasa ny safidy Clear, izay hamafa ireo horonan-tsary sy fantsona rehetra nampidirintsika tao anaty iray. Safidy ahazoana aina izy io, na dia mahery vaika kokoa aza amin'ity tranga ity.
Ahoana ny fomba hijerena ireo horonantsary YouTube ivelan'ny Internet
Araka ny hitanao, Video Blocker dia fanitarana tena ilaina, mora ampiasaina ary ahafahanao manafoana izay rehetra tsy mahaliana anao rehefa mampiasa YouTube amin'ny solosainao ianao. Ahoana ny hevitrao momba ity fanitarana ity amin'ny browser-nao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Tutorials » Fafao ny horonantsary sy fantsona YouTube izay tsy mahaliana anao amin'ity fanitarana ity
Yuka, ny fampiharana finday mamela antsika handinika sakafo sy kosmetika
PES eFootball 2020, fanavaozana izay tena tsara ho azy